“Xisbiga Waddani dhibaato ayuu hurinayaa u dul-qaadan mayno gacan Birr ah ayaanu ku qabanaynaa”.. wasiirka Daakhiliga | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“Xisbiga Waddani dhibaato ayuu hurinayaa u dul-qaadan mayno gacan Birr ah ayaanu ku qabanaynaa”.. wasiirka Daakhiliga
Hargaysa (SDWO): Wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa uga digay xisbiga mucaaridka ah ee Waddani in aan loo dul-qaadan Karin falalka nabadgeliyadda wax u dhimaya ee uu waddo, haddii ay joojin waayaana gacan Birr ah lagu qaban doono.
Yaasiin Maxamuud Xiir (faratoon), waxa uu sheegay in dhaq-dhaqaaqyadda uu maalmahan waddo xisbiga Waddani ee ka dhashay muranka ka taagan doorashadii guddoomiyaha golaha Wakiiladda in ay muuqdaan kuwo dalka gelin karra xasilooni darro aan loo baahnayn.
Wasiirka daakhiliga Somaliland oo maanta xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa u soo jeediyay cidii dood ka qabta qaabkii ay u dhacday doorashadii guddoomiyaha Wakiiladda in aanay haboonayn in warbaahinta la mariyo waxyaabo af-lagaado iyo anshax xumo ah.
Waxaanu ku taliyay in xisbiga Waddani haddii uu wax ka tabanayo doorashadaasi uu u marro qaabkeedda sharciga ah. Isagoo arrintaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Haddii muran ka jirro doorashadii guddoomiyaha golaha Wakiiladda, ma aha in qaabkan wax loo sheegayo looga hadlo, oo af-lagaado la isku mariyo warbaahinta.
Waana in qaabka ay leedahay u marro qofkii muran ka qaba ee wax diidan. Waxaa loo baahan yahay in aan golaha buuq la gelin, in aan xasiloonidda dalka wax la yeelin”.
Wasiir Faratoon, ayaa ka hadlay ka wasaarad ahaan tallaabadda ay ka qaadayaan cidii ku kacda waxyaabo amniga iyo xasiloonidda dalka lidi ku ah. “Dawlad ahaan iyo wasaarad ahaaba ka dul-qaadan maryno, mana yeelayno in dalka la geliyo xasilooni dari, oo la abuuro xiisad aan jirin” ayuu yidhi wasiirka daakhiliga.
Waxaanu intaas ku daray “Xisbiga mucaaridka ah ee Waddani, waxaanu u aragnaa in dhaq-dhaqaaqiisu uu dhibaato aan loo baahnayn u soo jiidi karro dalka, oo uu hurinayo xasilooni darro iyo buuq. Taana ka dul-qaadan mayno, kana yeelina mayno.
Haddii aanu nahay wasaaradda amniga qaabilsan gacan Birr ah ayaanu ku qabanaynaa, wixii dalka xasilooni darro u soo jiidayana cid-naba ka yeeli mayno”ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha.
Dhinaca kale wasiirka Daakhiliga ayaa ka hadlay falkii toogashadda ahaa ee maanta ka dhacay xarunta golaha Wakiiladda Somaliland ee magaaladda Hargaysa, kadib markii sida la sheegay uu muran iyo dagaal xagga af-ka ah dhex maray xildhibaan Saleebaan Cali Koore iyo guddoomiyaha cusub ee golahaasi Baashe Maxamed Faarax.
Waxaana la soo weriyay in kadib markii ay labadda masuul wada hadleen in Nin shicib ah oo la socday xildhibaan Koore uu Bistoolad ku riday guddoomiye Baashe, iyadoo halkaasi buuq iyo sawaxan ka dhashay.
Wasiir Faratoon, ayaa falkaasi maanta ka dhacay golaha ku tilmaamay mid uu si weyn ula yaabay ugana argagaxsay, isla markaana cid kastoo samaysay ay khalad gashay oo sharciga lala tiigsan doono.
Waxaanu yidhi “Runtii arrin aan la yaabay, oo aan ka argagaxay ayay igu noqotay, waana khalad oo cidii falkaa gacan ka hadalka ah lahayd, ama Hub ay rido ha noqoto ama gacan ay qaado ha noqotee, cidii gaysatay khalad ayay samaysay.
Mudane ha ahaado ama qof kale oo caadiya ha ahaadee, qofkii golaha Rasaasta ka riday khalad weyn ayuu ku jiraa, sharciga ayaana la marin doonaa”.